समाचार - TheSidhaKura
कमेडी च्याम्पियन सिजन–२ को विजेता भरतमणि पौडेल बन्न सफल भएका छन् । शनिबार राति सम्पन्न ग्राण्ड फिनालेमा सबैभन्दा बढी भोट पाएको आधारमा उनलाई विजेता घोषित गरिएको हो । भरतमणिले डाट्सनको कार र नगद २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे । यस्तै सेकेन्ड रनरअप सन्तोष थापा भए । उनले स्कुटर प्राप्त गरे । यसैगरी फस्ट रनरअप बिक्की… Read More »
कपिलवस्तु, असोज २ । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका १ बनकसवासामा यात्रु बाहक बस पल्टिदाँ १८ जना घाइते भएका छन् । रुकुमदेखि काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको ना ८ ख २९६ नम्बरको बस शनिबार विहान ४ बजे दुर्घटना भएको थियो । बसमा सवार ३१ मध्ये १८ जना घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी निरीक्षक दिलीप कार्कीले बताए… Read More »
बर्दिया, असोज २ । जङ्गली बँदेललाई थापेको विद्युतीय पासोमा परी एकैघरका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । पासोमा परी मृत्यु हुनेमा ठाकुरबाबा नगरपालिका–३ गोदानाका ३२ बर्षीय बालकृष्ण थारु, उनकी श्रीमती २९ बर्षिया सुनिता र बालकृष्णकी ४३ बर्षिया भाउजु बेलमतीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । गएराती खेतमा पानी हेर्न गएका बेला छिमेकीले बँदेल धपाउन धान… Read More »
काठमाडौं। गाउँ घर तिर अहिले पनि पानी परेपछि मकै भुटेर खाने प्रचलन छ। भुटेको मकैले शरीरको तापक्रम सन्तुलित बनाउने र शक्ति प्राप्त हुने विश्वास रहेको छ। यो वर्ष निकै पानी पर्यो। धेरै वर्षात भएको कारण कतै धनजनको क्षती पनि भयो। राम्रो वर्षात भएकै कारण कृषि उत्पादन पनि राम्रो भएको कृषकहरु बताउँछन्। असोज महिना लागेपनि देशको… Read More »
काठमाडौं, १ असोज । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चर्चित नायिका करिश्मा मानन्धरलाई फोन गरेका छन् । नायिका मानन्धरले सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत अध्यक्ष ओलीले आफूलाई फोन गरेको जानकारी दिएकी छिन् । उनले फोनमा केपी शर्मा ओली भनेर आउँदा सुरुमा आफू छक्क परेको पनि उल्लेख गरेकी छिन् । उनले फोनमा ओलीको आवाज सुन्दा आफूलाई… Read More »
काठमाण्डाै – अन्तरिक्षमा ९० दिन बसेन तीन चिनियाँ यात्री पृथ्वी फर्किएका छन् । चीनको अहिलेसम्मको लामो मानवसहितको अन्तरिक्ष अभियान सकेर तीन अन्तरिक्षयात्री पृथ्वी फर्किएका हुन् । पृथ्वीभन्दा तीन सय ८० किलोमिटर (दुई सय ४० माइल) माथि रहेको चीनले बनाएको अन्तरिक्ष केन्द्रको टियाहे मोड्युलमा ९० दिन बसेर उनीहरू पृथ्वी फर्किएका हुन् । चिनियाँ अन्तरिक्षयात्रीहरू न्ये खाइसङ, ल्यु… Read More »
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको टोली चर्चित गायिका विष्णु माझीको माइतीघर पुगेको छ । प्रहरी चापाकोट पुगेको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी उहाँको अवस्था बुझ्न आग्रह गरेको थियो । आयोगको पत्रपछि उहाँको अवस्थाबारे बुझ्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले गायिका माझीको माइतीघरमा प्रहरी टोली पठाए पनि घरमा… Read More »
लोकप्रिय गायिका मेचु धिमाल गाउँघरमा घाँसपात गरेर रमाउँदै
मेचु धिमाल हिमायलय टेलिभिजन एचडी टेलिभिजनबाट प्रसारित चर्चित गायन रियालिटी शो ‘दि भ्वाइस अफ नेपालकि’ टप ८ फाईनलिस्ट हुन् । सामाजिक सञ्जालमा सर्वाधिक चर्चामा रहेकी मोरङ उर्लाबारीकि मेचु धिमालले ‘दि भ्वाइस अफ नेपालबाट’ चर्चामा आएकी उनले दर्जनौ गीत गाईसकेकी छिन् । मोरङ उर्लाबारीकी मेचु धिमाल परिवारकै ठुली छोरी हुन् । उनका ३ बहिनी पनि छन्… Read More »
मोजाविना नै जुत्ता लगाउने बानी छ ? सावधान !
फेशन भन्ने कुरा प्रायः बदलिरहेको हुन्छ । आजकल मोजाविना नै जुत्ता लगाउने फेशन चलेको छ । यसरी जुत्ता लगाउँदा आकर्षक त देखिएला तर यसले छालासम्बन्धी अनेकौं समस्या निम्त्याउँछ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार, मोजाविना जुत्ता लगाउँदा फंगल इन्फेक्सन हुन सक्छ । दिनभरिमा हाम्रो गोडाबाट अत्यधिक पसिना निस्कन्छ र मोजाले त्यो पसिना सोस्छ । तर मोजा लगाउनुभएन भने… Read More »
आजदेखि टिकटक नचलाउन प्रहरी प्रमुखको निर्देशन
ओखलढुङ्गा / ओखलढुङ्गामा प्रहरीले टिकटकलगायत मनोरञ्जनका एप चलाउन नपाउने भएका छन् । सामाजिक रूपमा उत्तरदायी बनेर समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्लामा कार्यरत सबै प्रहरीलाई टिकटकलगायतका मनोरञ्जनमा व्यस्त नहुन निर्देशन दिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख गोविन्दराज काफ्लेले प्रहरी कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । जिल्ला प्रहरी… Read More »